Ny fanajantsika ny fitoviana, ny fahasamihafana ary ny fampiatiana
Efa ela ny Blue Ventures no niezaka nampihatra fomba fiasa izay mamaha ireo olana mikasika ny tsy fitoviana ara-sosialy izay mianjady amin’ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana nandritra ny taona vitsy farany teo. Mino izahay fa ny fampiroboroboana ny fitovian-jo, ny fahasamihafana ary ny fampiatiana (DEI) amin’izany sehatra izany dia ahafahana mamaha ireo olana ireo, no sady ahafahana manomboka hetsika hiarovana ny tontolo iainana amin’ny fomba miavaka sy miampaka kokoa amin’ny vahoaka, tarihana fikambanana izay mahomby noho ny fisian’ny fahasamihafana eo anivon’nyekipa ao aminy sy ny fahaleovantenan’ny fokonolona iasany.
Ny iraka sy ireo soatoavina ijoroantsika dia mifanaraka amin’ny fampahaleovantena sy fanentanana ny fokonolona. Na dia iainana anatin’ny asa rehetra sahanintsika anefa ireo soatoavina ireo, dia fantatray fa misy ny tsy rariny sy ny tsy fitoviana eo anivon’ny asa, ny fikambanana ary ny sehatra misy antsika.
Ny volana septambra sy oktobra 2020, dia nikarakara andiana valan-dresaka isika, izay nizaran’ireo mpiara-miasa ny fiainany ny DEI eo anivon’ny Blue Ventures. Mpiasa maherin’ny 160 (60 isan-jaton’ny ekipantsika maneran-tany) no nandray anjara tamin’ireo valan-dresaka ireo, ary nisy ihany koa ny fanadihadiana miafina nalefa tamin’ireo mpiasa rehetra. Mankasitraka ireo mpiara-miasa rehetra naneho hevitra, nizara ny zavatra niainany sy nanambara ireo fomba maro azo hanatsarana ny fikambanana izahay.
Ny fiovana dia mitaky fandavan-tena, fandinihana ary fahadiovam-po, na izany eo amintsika na amin’ireo fokonolona iasantsika, ary koa finiavana hijery ireo olana saro-pady rehefa mitranga izany. Araka ny toro-hevitr’ireo Maintihoditra, ireo Teratany ary ireo Tsifotsihoditra (“Black, Indigenous and People of Colour – BIPOC”) eo anivon’ny ekipantsika, eo anivon’ireo fikambanana mpiara-miasa amintsika, sy ireo fokonolona miara miasa amintsika, dia mikiry mafy izahay amin’ny fanoherana tsy ankihambahamba ireo endrika fanavakavahana rehetra – anisan’izany ny fanavakavahana noho ny ambaratongan’asa – ka anatin’ny fikambanantsika no anombohana izany. Ankoatr’izay, dia manohy ny ezaka amin’ny fanohanana ny fiarovana ranomasina mitovy tantana sy mampiaty ny rehetra amin’ny fomba tena ahitana taratra ny fiainan’ireo mpanjono madinika sy ireo fokonolona amorontsiraka maneran-tany isika.
Araka ireo fandinihana natao teo anivon’ny ekipa ary, dia raisina ireto fanapahan-kevitra manaraka ireto mba hanamafisana ny DEI ato amin’ny Blue Ventures :
– Namorona sehatra anatin’ny rafi-pifandraisana anatiny isika ahafahan’ireo mpiara-miasa mizara ny loharanom-pahalalana ilaina, lahatsoratra, horonantsary ary fandalinana momba ny fahamarinana ara-sosialy sy ny fifandraisan’izany amin’ny asantsika. Tianay izany seha-pifandraisana izany mba ho azon’ny rehetra ampiasaina araka izay tratra, ka noho izany dia manantena ny fivoarany sy ny fandrosoany araka ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay.
– Ankehitriny dia tsy ankanonona anarana avokoa ireo fangatahana asa rehetra mandritra ny fizotry ny fifantenana, ary tokony mahitsy ireo tolotr’asa, tsy misy fampisehoana ny maha-lahy na maha-vavy, mba isorohana ny fitsarana ivelany mety ataon’ny mpanadina. Misy ihany koa ireo loharanom-pahalalana napetrakay ho an’ny mpiasa, ao anatin’ny rafi-panarahana ireo fangatahan’asa. Izany dia ahitana horonantsary mamaritra ny momba ny fitsarana ivelany, ny fahasamihafana, ny fampiatiana ary ny fandraisana anjara, ary koa fitaovana ahafahana mitily ireo tolotr’asa mitanila ho an’ny lahy na ho an’ny vavy. Ny politikan’ny fampidirana mpiasa dia mamelabelatra momba ireo fitsipika fampidirana mpiasa, izay ahitana ny tsy fanavakavahana sy ny fanomezan-danja ny fahasamihafana.
– Nanangana vondron’asa DEI izahay, hisahana ny fanentanana, fiarovana ary fampiroboroboana ny DEI eo anivon’ny asantsika. Ny vondrona dia mampiseho ny fifangaroharoan’ny ekipantsika maneran-tany, ary ahitana mpikambana 15 samihafa taona niasana, sy solontena iray avy farafahakeliny avy amin’ireo firenena dimy izay misy ekipa nasionaly ato amin’ny Blue Ventures.
Izany vondron’asa izany dia natao :
– Handray ireo fanontaniana, ahiahy ary hevitra naroso nandritra ny valan-dresaka tamin’ny volana septambra sy oktobra 2020.
– Hijery ny laharam-pahamehan’ny DEI sy hijery ireo tsy ampy amin’ireo politika sy fitsipika efa mipetraka.
– Hamolavola lamin’asa izay hotsarain’ny mpanolo-kevitra ivelany momba ny DEI amin’ny faran’ny taom-piasana 2021.
– Hanohana ny fampiharana ny lamin’asa DEI.
– Handray anjara amina fiofanana momba ny DEI, toy ny momba ny fitsarana ivelany, ny fahasamihafana ary ny fampiatiana.
– Ho lohan’ny fampiharana ny DEI eo anivon’ny fikambanana iray manontolo ary tompon’andraikitra amin’ny fametrahana tontolom-piasana mitovy lenta, mampifangaro ary mampiaty ny rehetra.
– Hanaraka sy hampita amin’ny fikambanana iray manontolo ireo antontan’isa momba ny DEI nifaneken’ny vondron’asa momba ny DEI.
– Hisolo tena ny Blue Ventures any ivelany momba ireo lohahevitra mifanaraka amin’ny DEI.
Na dia ekena ary fa ho lava ny dia amin’ny fanovana ireo fitondran-tena sy ireo fomba fiasa efa lalim-paka eo amintsika, dia manokatra ny saintsika hatrany amin’ny fanohizana ny fampivoarana ny fikambanana. Miezaka hatrany izahay mba ho vato fehizoro amin’ny fifandraisana arak’asa ny fitovian-jo, ny fanekena ny fahasamihafana ary ny fampiatiana, na ao anatin’ny Blue Ventures na amin’ireo mpiara-miombon’antoka amintsika.